Icawa yaseLönneberga | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Bona kwaye wenze » Utsalo lwezotyelelo » Iindawo zenkcubeko nezembali » Icawa yaseLönneberga
Icawe yaseLönneberga imi kakuhle kakhulu, kwinduli evula ihlathi, malunga neekhilomitha ezi-6 ukusuka kwidolophu yaseSilverdalen naseLönneberga.
Icawe yangoku yakhiwa ngo-1870-72 kunye nekwayara entshona kunye nokungena empuma, nto leyo engaqhelekanga kakhulu.
Icawa yaseLönneberga iye yabaninzi ababengaphambi kwayo. Ukusuka kweyona nkonzo indala, eyayakhiwe embindini wenkulungwane ye-1300, umnqamlezo woloyiso ugcinwe. Ngokwesiko, lecawe yamaplanga aphakathi kufanele ukuba ibinendawo yayo iimitha ezingama-400 emazantsi okanye kumzantsi-ntshona wale ndawo ingcwele. Kuthiwa yayifana nendawo yokugcina izilwanyana kwaye yakhiwa ngaphambi kowe-1341. Ngasekupheleni kwenkulungwane ye-1500, kuthiwa yathatyathelw 'indawo yicawa entsha eyenziwe ngomthi, eyadilizwa yatshiswa ngamaDanes ngokunxulumene neMfazwe yaseKalmar ngo-1612.
Emva kwalomnyhadala, icawe ye-1600 yenkulungwane yakhiwa, neyayingumbonisi wecawe yangoku. Le yakhiwe ngamatye nangokhuni kwaye yahlala apho de kwaba malunga ne-1870
Ngaphantsi kwepulpiti kukho isitulo som-oki somtshato, esigcinwe kwifenitshala yecawa yakudala. Embindini wodonga olude olusezantsi kukho imizobo yeoyile, eyayiyi-altare kwicawa yakudala kwaye nengalo yekhandlela nayo iyagcinwa.
Imizobo yeoyile kunye nengalo yekhandlela zanikelwa nguMajor Lars Weidenhielm owasweleka eRiga ngo-1709. Umfazi wakhe uChristina Klint (d. 1739) wayengumnini wefama yaseSaxemåla eLönneberga. Ecaweni ungabona iingubo zeengalo zosapho lakwaWeidenhielm.
Emangcwabeni kukho iindawo ezinqamlezileyo zamaplanga ezibonisa le ndawo.
577 94 ILönneberga
4.4 ngaphandle kwe-5.0
23 uphononongo kuGoogle
Inkonzo entle kakhulu eneenkcukacha ezintle.
Icawe entle, ehlaziyiweyo ngoku .....
Indawo entle. Ngelishwa icawa ivaliwe ngenxa yokuhlaziywa kwayo.
4/5 4 kwiminyaka eyadlulayo
Inkonzo entle. Xa usiza uqhuba endleleni usuka eSilverdalen, ndihlala ndichukunyiswa ngumbono necawa.
Inkonzo entle kakhulu